စုဆောင်းထားသော Minifigures မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
02 / 08 / 2021 03 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 255 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, ဗိုလ်ကြီးဗြိတိန်, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်း Minifigures, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, Peggy ကို Carter, ရာသီ 2, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
01 / 08 / 2021 01 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 314 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76131 သေစားသေစေသော Compound တိုက်ပွဲ, 76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော, စုဆောင်း Minifigures, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, marvel ဒဏ္ဍာရီ, သေးသေးလေး, Nebula, ကြယ်စင်သခင်, စတား-သခင်ဘုရား, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
LEGO နှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ Marvel စုဆောင်းထားသော Minifigures ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
19 / 07 / 2021 19 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 332 Views စာ0မှတ်ချက် မိကျောင်း Loki, စုဆောင်း Minifigures, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego ကောလာဟလများ, Loki, Marvel, အသေးစား, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, ကောလာဟလာ, Sylvie, WandaVision
နောက်ထပ်ကောလာဟလသတင်း LEGO အတွက်အစီရင်ခံစာ Marvel Collectible Minifigures သည်ပေါ်ထွက်လာသောထူးခြားသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအပါအဝင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်
03 / 04 / 2021 03 / 04 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 1398 Views စာ0မှတ်ချက် 71030 Looney တီးလုံး, အုတ်ဖို, bugs Bunny, CMF, စုဆောင်း Minifigures, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Daffy ဘဲ, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, looney သီချင်းများ, အမ်ဗင်artIan, ဝက်ဝက်, Tasmanian Devil, time Warner, Warner Bros, Warner Bros.
LEGO VIDIYO 43101 အလုပ်ဖော်တွေမကောင်းဘူးလား။
14 / 03 / 2021 14 / 03 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 439 Views စာ0မှတ်ချက် ၄၃၁၀၈ Bandmates, စုဆောင်း Minifigures, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ကဲ, Lego, Lego Vidiyo, အသေးစား, သေးသေးလေး, Vidiyo, YouTube ကို
LEGO VIDIYO သည်စုဆောင်းထားသော Minifigures စီးရီးအမျိုးအစားအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးမျက်မမြင်သေတ္တာများအတွက်ပလတ်စတစ်အိတ်များကိုတူးသည်။
22 / 02 / 2021 22 / 02 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 572 Views စာ0မှတ်ချက် စုဆောင်း Minifigures, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, စုဆောင်းထားသောအသေးစားစီးရီး 21, Lego, Lego Vidiyo, စီးရီး 21, အာကာသရဲ, အာကာသရဲ Guy, Vidiyo
တီထွင်သူတည်ဆောက်သူတစ် ဦး က LEGO VIDIYO BeatBox အပိုင်းအစများအားအသံမှဒြပ်စင်ကိုယူပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသုံးပြုမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
DK သည်အသေးစားဓာတ်ပုံအပါအ ၀ င် LEGO စာအုပ်အသစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
21 / 02 / 2021 21 / 02 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 526 Views စာ0မှတ်ချက် စာအုပ်, စုဆောင်း Minifigures, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, စုဆောင်းထားသော minifigures စီးရီး 16, DK, DK စာအုပ်များ, ခရီးသည်, Lego, Lego စာအုပ်, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, အသေးစား, ပင်ဂွင်းကျပန်းအိမ်, စီးရီး 16
LEGO စာအုပ်အသစ်ကိုနောက်ဆုံးပေါ် DK စာအုပ်ထုတ်ကုန်ဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်